Mpanamboatra sy mpamatsy ampahany amin'ny fiara ambanin'ny fiara China Bulldozer | Jinjia
Ny bulldozer dia fitaovana lehibe ampiasaina hanadiovana ny tany, vatolampy, fasika sy potipoti-javatra matetika hita amin'ny fanamboarana, ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ary ny fambolena. Ity karazana fifandraisana tsy tapaka amin'ny fitaovana sy ny hery miverimberina ao amin'ny masinina ity dia miteraka filàna fanampiana amin'ny ampahany. Ny fikojakojana tsy tapaka ny fitaovanao miasa any an-toerana dia manampy amin'ny fampitomboana ny andro an-tsabatrao ary ny fanaraha-maso ny fiarakaranao dia miantoka ny fahombiazan'ny asa indrindra.
Ireo singa isan-karazany ao anaty kibor-bokotra crawler - rohy, tsimatra, kirihitra, sprockets, roulant, idlers, kiraro ary frame - toa faritra tsotra sy mahitsy. Aza manao hadisoana; Rehefa atambatra ao anaty rafitra iray manohana sy mandroso milina karazana lozisialy ireo singa ireo, dia lasa mekanika sarotra ny underzeria dozer, izay, hoy ny manam-pahaizana amintsika, dia mety hahatratra ny antsasaky (na mihoatra) ny volavolan-dalàna fanamboarana crawler dozer mandritra ny androm-piainany.
Mazava ho azy fa tsy afaka miresaka an-tsipiriany be loatra momba ilay fametavetana crawler eto isika. Saingy azontsika atao ny mamerina mijery ny fotokevitra vitsivitsy momba ny famolavolana, ny antony anaovana (ho an'ny rojo sy ny sprockets, indrindra), ny fikojakojana ny fikojakojana sy ny teknika fandidiana, izay raha atambatra, dia mety hanampy anao hifehezana ny fitafiana ambanin'ny volo ary, vokatr'izany, hividianana ny sarany ambanin-tsarety.
Amin'ny teny midadasika, ny lakandranon'akanjo dozer dia azo sokajiana amin'ny fomba fanosotra ny tsimatra sy ny kirihitr'ala na tsia. Mazava ho azy fa ny pin sy ny bushings dia mamorona ny savily amin'ny rojo lalana izay mamela ny rohy rojo miondrika manodidina ny sprockets sy ny mpiremby azy.
Ny faritra ambanin'ny zotram-bozaka HONGDA dia manome lanja lehibe ny famatsiana singa feno ho an'ny filàn'ny bulldozer rehetra. Na eo an-tsena ianao mba hahitana fivarotana vaovao, ambim-bola marina, efa niasa tsara na namboarina indray, azonay atao ny manampy ny filanao fanamboarana. Miaraka amin'ny tambajotran'ireo mpanamboatra premium indrindra, azonao antoka fa hiaina fihenan'ny fihenam-bidy sy fampitomboana ny vokatra
Ny faritra HONGDA dozer ambanin'ny kariera dia manome ny kalitaon'ny marika Koreana sy Italiana ambanin'ny kalitao izay hamonjy anao amin'ny valiny amin'ny mpivarotra OEM anao.
Manolotra fiantohana 2 taona 3000 ora amin'ny vokatra izahay.
Antsoy izahay na mandefasa fangatahana fitanisa an-tserasera hanomboka hitahiry ny sarany ambanin'ny kalesinao!
Teo aloha: Ductile iron cast for track roller end cover
Manaraka: OEM namboarina China Track Chain D8n Bulldozer Chain Link 9W3317 Undercarriage Parts
Ampahany amin'ny fametahana kodiarana
Crawler Bulldozer ambanin'ny tany
Fiaramanidina Bulldozer ambanin'ny fiara
Fitaovana ambanin'ny fiara ho an'ny Bulldozer